Russian Piroshki Ntụziaka | Di na Nwunye Maka Uzo
Piroshki (eburu ụzọ kwupụta ya mgbe anglicized dị ka Pirozhki) bụ nri Russia dị ka ọdịnala si mee ya bụ nke eji meats egwuregwu dị ka ọbọgwụ, ọgazị, na oke bekee bụ isi protein na ndochi. N’enye ụkọ ụdị anụ ndị a na-ejikarị eme ihe, a na-eji uzommeputa a (na ọtụtụ nke a na-ejikarị) na anụ na-amịkọ na kabeeji.
Enwere ike ịgwakọta ha na osikapa, akwụkwọ nri dị iche iche na ngwa nri, ma na-ahụta ka ha bụ ihe agụụ na ntinye - dabere na ebe ị na-eri ma onye gị na ha ri!
N'ezie: Appetizer, Ntinye
1 1 / 2 iko gbakwunye mmanu akwukwo nri nke 2
2 iko thinly sliced ​​kabeeji
1 / 2 Iko yabasị
1 / 2 pound Anụ ehi akwọrọ akwọ
3 / 4 teaspoon dill gbara agba
1 / 2 teaspoon garlic ntụ ntụ
3 / 4 teaspoon nnu
1 / 4 teaspoon oji oji
1 Ihe ngwungwu ngwugwu nke 16 oz gbara agba na friji oyi akwa
Na skillet buru ibu karia okpomoku di okpukpo, kuo mmanu mmanu 2; kabeeji saute na yabasị 5 na nkeji 7 ma ọ bụ ruo mgbe a na-akụgharị kabeeji.
Debe ngwakọta kabeeji n'ime nnukwu efere ma wepụta ya.
N’otu skillet ahụ n’elu nnukwu-ọkụ, sie nri anụ ehi minit 5 ma ọ bụ ruo mgbe agba aja aja, na-agbatu ihe ọ bụla ka ọ na-esi nri; igbapu mmiri.
Tinye ngwakọta kabeeji azụ n'ime skillet. Ebido na dil, ntụ ntụ galiki, nnu, na ose; mix ọma.
Jiri nwayọ wepụta bisikiiti ọ bụla na ọkara, na-eme okirikiri 16.
Site na mkpịsị aka gị, gbajie okirikiri ọ bụla n'ime dayameta nke 3. Debe tablespoon anụ ezi n'ime anụ dị n'ime etiti mgwakota agwa ọ bụla.
Kechie mgwakota agwa na ọkara n’elu anụ ahụ, na-akpụzi ọkara ọnwa, ma kechie akụkụ iji mechie.
N'ime skillet dị omimi n’elu nnukwu ọkụ, okpomoku a na-etinye mmanụ iko 1-1 / 2 ruo mgbe a na-ekpo ọkụ mana ọ naghị a smokingụ sịga.
O kwesiri ibu ihe dika 350 digiri F.
Debe mgwakota agwa juru eju na mmanụ ma sie ya na minit 1 ruo 2 nkeji n'akụkụ ma ọ bụ ruo mgbe ọla edo na-acha aja aja. Wepu ya na slotted ngaji na mpempe akwukwo tochiri ahihia.
Ije ozi dị ọkụ.
Category: Appetizer, Tinye, Europe, Nri na ihe ọṅụṅụ, Ezi ntụziaka, Russia, Russian Tags: piroshki, uzommeputa, Russia
← Ebe kacha mma na Halloween na Europe
Etu esi etinye ụbọchị 5 na Sidney →